Yaa noqon doona Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya..? (Qiimeyntii ugu danbeysay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Yaa noqon doona Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya..? (Qiimeyntii ugu danbeysay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa bilowday wareegii koowaad ee codeynta Doorshda xilka Madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku tartamayaan in ka badan 30 musharax oo ay ku iraan saddex madaxweyne oo hore.
Yaa noqonaya Madaxweyne
Previous articleDEDGEG: Musharixiin Cusub oo ka haray Tartanka Doorashada Madaxweynaha Somaliya
Next articleSiciid Deni iyo Farmaajo oo ku horeeya Wareega koowaad iyo Natiijo lama filaan ah (Akhriso)